Tag: css | Martech Zone
Tailwind CSS: Sora-miasa CSS voalohany sy API ho an'ny endrika haingana sy haingana
Alatsinainy, Septambra 13, 2021 Alatsinainy, Septambra 13, 2021 Douglas Karr
Na dia miditra amin'ny teknolojia isan'andro aza aho dia tsy dia manam-potoana betsaka araka izay tiako hizarana ireo fampidirana sarotra sy mandeha ho azy ampiasain'ny orinasako ho an'ny mpanjifa. Ary koa, tsy dia manana fotoana be dia be aho. Ny ankamaroan'ny teknolojia soratako dia orinasa mitady Martech Zone manarona azy ireo, fa isaky ny indray mandeha - indrindra amin'ny alàlan'ny Twitter - hitako misy buzz vaovao vaovao
Ny fampidirana mialoha ny mailaka mialoha dia nampitombo ny tahan'ny fametrahana boaty 15%
Alatsinainy, 14 Jona, 2021 Alarobia, Jona 16, 2021 Douglas Karr
Hadalana ny fandefasana mailaka. Tsy mivazivazy aho. Efa 20 taona mahery izay no niseho fa mbola manana mpanjifa mailaka 50+ izahay izay samy hafa no mampiseho ny kaody mitovy. Ary izahay mpamatsy tolotra Internet (ISP) an'aliny izay samy manana ny fitsipiny manokana momba ny fitantanana SPAM. Manana ESP izahay izay manana fitsipika henjana tsy maintsy ampifanarahin'ny orinasa rehefa manampy mpanjifa tokana… ary ireo lalàna ireo dia tsy ampahafantarina velively amin'ny
Ireo tranga izay misy fiantraikany haingana eo amin'ny pejy misy anao eo amin'ny tranonkalanao
Sabotsy, Martsa 13, 2021 Sabotsy, Martsa 13, 2021 Douglas Karr
Nihaona tamina mpanjifan'ny fomba fijery iray izahay androany ary niresaka momba ny fiantraikan'ny hafainganam-pandehan'ny entana. Misy ady tokoa amin'ny Internet ankehitriny: mitaky traikefa an-tsary manan-karena ny mpitsidika - na dia amin'ny fampisehoana retina avo lenta aza. Ity dia mitondra sary lehibe kokoa sy fanapahan-kevitra avo kokoa izay mitombo ny haben'ny sary. Ny motera fikarohana dia mitaky pejy haingam-pandeha izay misy lahatsoratra manohana be. Midika izany fa bytes sarobidy no laniana amin'ny lahatsoratra fa tsy sary.
Tranonkala famolavolana tranonkala 2016 no dinihina alohan'ny hamoronana ny tranokalanao
Talata, Janoary 12, 2016 Talata, Janoary 12, 2016 Pamela Webber
Nahita orinasa marobe nifindra nankany amin'ny traikefa madio sy tsotra kokoa ho an'ireo mpampiasa tranokala izahay. Na mpamorona ianao, mpamorona, na tranonkala tianao fotsiny dia azonao atao ny mianatra zavatra iray amin'ny fijerena ny fomba fanaovan'izy ireo izany. Miomàna hahazo aingam-panahy! Animation Miala ao ambadiky ny andro voalohan'ny andro amin'ny Internet, izay feno flif gif, sary mihetsika, bokotra, sary masina ary dihy mandihiza, ny sary mihetsika ankehitriny dia midika famoronana hetsika mifandraika sy mamaly.
Manafaingana ny tranokalanao amin'ny CSS Sprites
Alatsinainy, Jolay 9, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Manoratra momba ny hafainganam-pandehan'ny pejy aho amin'ity tranokala ity ary ampahany lehibe amin'ny famakafakana sy ny fanatsarana ataonay amin'ireo tranokalan'ny mpanjifanay izany. Ankoatry ny fifindrana mankany amin'ny lohamilina matanjaka sy ny fampiasana fitaovana toa ny Content Delivery Networks dia misy teknika fandaharana maro hafa azon'ny mpandrindra tranonkala antonony ampiasaina. Ny fenitra ho an'ny Cascading Style Sheet tany am-boalohany dia mihoatra ny 15 taona ankehitriny. CSS dia fivoarana lehibe teo amin'ny tranonkala